"स्वचालित" केही तरिका मा जैविक कुरा मा धेरै। त्यसैले, हामी हामीले सास फेर्ने गर्दा, हार्टबिट र अन्य धेरै कुराहरू नियन्त्रण छैन, लाग्छ छैन। र विशिष्ट व्यवहार को आधार के हो? यो हामी वातानुकूलित reflexes को गठन को संयन्त्र द्वारा मदत गर्दै हुनुहुन्छ। निष्पक्षता मा यो विषय सजिलो छैन, र सबै impressionable मान्छे लेख पढ्दा अघि, साहस चाहिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
गरेको वातानुकूलित reflexes को गठन को शारीरिक तंत्र कुरा गरौं। यो विषय व्यापक छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ र कार्य को संयन्त्र को समझ को लागि आफ्नो विभिन्न घटक को महत्वपूर्ण नम्बर बुझ्न हुनुपर्छ। धेरै सैद्धान्तिक underpinnings बिना गर्न सक्नुहुन्न। सुरू गरौं। लेख मा हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिसेप्टर्स छ। उत्तेजना को तीव्रता एक निश्चित सीमा बल भन्दा ठूलो छ जब excitation हुन्छ। यो संवेदनशील प्रक्रिया फैलाउन र CNS (केन्द्रीय स्नायु प्रणाली) हस्तान्तरण गर्न थाल्छ। कि पछि, प्रतिक्रिया - एक सहज क्रिया प्रतिक्रिया। एक निश्चित क्षेत्रमा कार्य गर्ने excitation, केन्द्र संवेदी नसाहरू शरीर, तर केवल एक सानो भाग छैनन् ठेगाना। नियम, जानकारी विशिष्ट प्रभावोत्पादक साइटहरु प्राप्त।
शरीर को सुविधाहरू
हामीलाई ब्याज अस्थायी जडानहरू को गठन को लागि एक संयन्त्र प्रदान गर्दछ। यस वातानुकूलित सहज क्रिया प्रत्येक उत्तेजना (ध्वनि, प्रकाश वा अन्य) केही अवस्थामा एक संकेत मूल्य प्राप्त गर्ने peculiarity छ। उनि एक क्रोध उत्पन्न भएका छन् भएपछि, एक विशेष प्रतिक्रिया भनिन्छ। यो एक मोटर, secretory, भोजन, रक्षा र यति मा हुन सक्छ। यो उदाहरण विचार गर्नुहोस्: बित्तिकै हामी खान भनिन्छ सुन्न रूपमा, तटस्थ उत्तेजना सक्रिय र salivary सहज क्रिया कार्य गर्न थाल्छ। हामी खेल त्यसो गर्दा समान कुरा। तसर्थ, शरीर LOADINGS संख्या कम छैन भनेर बुझ्छ, र राम्ररी हृदय दर, रक्तचाप, चयापचय तीव्रता र यति मा निगरानी गर्न थाल्छ। यी रूपान्तरण केही हामी आफैलाई लागि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, यो हृदय आफ्नो छाती बाहिर हाम फाल्न शाब्दिक हुन छ रूपमा, चाँडै एक सय केही मीटर चलाउन आवश्यक छ। यो सबै वातानुकूलित reflexes छ।
reflexes थप पहिलो वाल्क गरौं। तिनीहरूले मात्र शारीरिक, तर पनि मानसिक हुन सक्छ। सहज क्रिया - त्यसैले, एक व्यक्ति कोठा छोड्दा, सधैं बन्द ज्योति बारी। उहाँले लाग्छ छैन, तर स्वतः सबै आवश्यक कार्यहरू बनाउँछ। यस्तै केही कम र टेलिफोन नम्बर को उदाहरण हुन सक्छ। त्यसैले अपरिचित, तर आवश्यक एक शक्ति हुनेछ पहिलो केही मान्छे देखि सात अंक डायल गर्न। तर महत्त्वपूर्ण निश्चित सदस्य संख्या (उदाहरणका लागि, एक परिवारको सदस्य), त्यसपछि यसलाई पनि व्यक्तिको ध्यान बिना हुनेछ भने। कि, संख्या सहज क्रिया द्वारा डायल गरिने छ। यस्तो अवस्थामा, हामी केही जानकारी दीर्घकालीन स्मृति प्रतिबिम्बित र मस्तिष्क गतिविधि को एक अतिरिक्त उप-प्रक्रिया रूपमा त्यहाँ बाट प्राप्त भएको थियो भनेर भन्न सकिन्छ।
तिनीहरूले कसरी उत्पन्न गर्छन्?
का अवस्थाको र वातानुकूलित reflexes को गठन को संयन्त्र हेरौं। यो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो:
पहिले उत्पन्न प्रतिक्रिया संग बारम्बार संयोजन indifferent उत्तेजना।
को indifferent एजेन्ट "Recharge" मौका दिन्छ जो एउटा निश्चित समय अवधि।
को स्नायु प्रणाली को जोडदार गतिविधि अन्य प्रकार को अभाव।
excitability को पर्याप्त स्तर।
यस वातानुकूलित उत्तेजना माथि-सीमा तीव्रता।
वास्तवमा, "हुक" गर्न मानव शरीर गाह्रो छ। यो छाला को सतह मा बसाबास गर्नु भनेर जीवाणुहरु को ठूलो संख्या तथ्यलाई कारण छ। र हामी अचाक्ली संवेदनशील थिए भने, हामीलाई बाँकी थाहा छैन। टिप्पणी पनि एउटै अवस्थामा अर्को reflexes धेरै छिटो विकसित भन्ने तथ्यलाई छ। अहिलेसम्म विभिन्न गति।
गरेको Pavlov एक वातानुकूलित सहज क्रिया को गठन को संयन्त्र हेरौं। यो परिवारको नाम धेरै चिनिएको छ। तर के यो व्यक्ति प्रसिद्ध छ? उहाँले वातानुकूलित reflexes को गठन र मस्तिष्क Cortex को गतिविधि लिङ्क। र यो सम्पूर्ण विश्व लागि जिम्मेवार छ, र यसको व्यक्तिगत भागहरु। यसरी, यो कि ती मुछिनुभएको चाप र्शतहीन र ससर्त reflexes फेला परेन। तिनीहरूलाई बीच त्यहाँ बारम्बार संयोजन संग एक अस्थायी जडान छ। किन यति? यसलाई यदि कुनै सुदृढीकरण हुनेछ, त्यसपछि यसलाई गायब हुनेछ पाइएको छ। प्रत्येक चाप यसको आफ्नै peculiarity छ। त्यसैले, यो एक prearranged संकेत वा unconditioned सुदृढीकरण प्रयोग गर्न सक्छन्। यो उदीयमान सम्बन्ध मूख्य सम्बन्ध को सिद्धान्त मा काम गर्दछ उल्लेख गर्नुपर्छ। समय, यो वातानुकूलित सहज क्रिया प्रतिक्रिया को उपस्थिति मा परिणाम। त्यसैले को बोल्न गलत "ससर्त सहज क्रिया चाप।" Crustal गठन तंत्र दुई घटक मुछिएको।
यो वैज्ञानिक भनेर विचार गर्न कसरी गर्नुभयो? "कुकुर (क) Pavlova" - शायद धेरै यो अभिव्यक्ति सुनेको छु। यो reflexes सन्दर्भमा उदाहरण को दुनिया मा एक साँचो सन्दर्भ छ। वैज्ञानिकले एक पटक पाचन प्रणाली अध्ययन। र उहाँले जब प्रकाश मा आउछ, खाना को आपूर्ति बारे संकेत, यो कुकुर salivate सुरु बताए। र तिनीहरूले खाना प्राप्त गर्छन् भने पनि छैन, लालास्रवण अझै पनि हुनेछ। वैज्ञानिक यो अनौठो तथ्य रुचि र 1903 मा उहाँले पलटा संयन्त्र बारे विश्वव्यापी घोषणा। वैज्ञानिक समुदाय त उहाँलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ कि यो खोज द्वारा प्रहार भएको थियो। यसबाहेक, 1904 मा। प्रदर्शन मा, यो विभिन्न तरिकामा विभिन्न जनावर reflexes उत्पादन कि फेला परेन। यसैले, कुकुर को लागि एक 10-20 संयोजन गर्न थियो। एउटै अवस्थामा निम्न reflexes छिटो गठन गरेका थिए। परिणाम यो पर्याप्त छ कि व्यक्ति र stimuli संयोजन (नमस्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक) आदर प्राप्त भएको थियो।
एक वातानुकूलित सहज क्रिया को गठन को संयन्त्र उदीयमान प्रभाव अझ हुनेछ जो बारम्बार stimuli, एक स्किर्मिस छ। कुकुर को सम्बन्ध मा, यो इष्टतम समय सीमा 5-10 सेकेन्ड हो कि फेला परेन। साथै, कि अवस्थामा ध्यान दिनुहोस् जहाँ reinforcing stimuli को indifferent अघि सञ्चालन गर्न, वातानुकूलित reflexes उत्पादन गर्दैनन् सुरु गर्नुहोस्। यस्तो जैव रसायन को peculiarity छ। यो पनि शरीर तयार छ जब Arcs बीच सबै भन्दा राम्रो शिक्षा लिंक उत्पन्न कि फेला परेन। हेरिएको सुस्ती उल्लेख थियो जब ससर्त reflexes सबै अवलोकन गठन बिस्तारै वा उत्पन्न कि। एउटै मानिस को भने गर्न सकिन्छ। यहाँ के वातानुकूलित reflexes को गठन को संयन्त्र बारे भने गर्न सकिन्छ छ।
यस लेखमा संक्षिप्त दायर जानकारी मात्र समग्र अवस्था एक विचार दिन्छ, र तपाईं विषय रुचि हो भने, यो वैज्ञानिक काम थाह प्राप्त गर्न सम्भव छ - तिनीहरूले धेरै रोचक र सूचनात्मक छन्। साथै, केही कठिनाइ देख्न सकिन्छ, यो भयातुर सिस्टम conditioned reflexes सम्बन्धित छैन भनेर केन्द्र प्रभुत्व भने। त्यसैले, जब कुकुर अगाडि बिरालो छोड्छ र एक चिम समावेश तिनीहरूले लालास्रवण भयो। एउटै आफ्नो मामिलामा संग व्यस्त छ मानिस बारेमा भने गर्न सकिन्छ।
यो जीव प्रशोधन गर्न मात्र तयार भएको वातानुकूलित reflexes को गठन सम्भव दिइएको भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैले, यदि तपाईं एक कुकुर संग स्थिति को देखो, लार मात्र ती अवस्थाहरूमा मा जनावर उपवास बसिसक्नुभएकोले राज्य हुँदा हुन्छ। यो उहाँले उत्साहित खाना केन्द्र थियो भन्ने तथ्यलाई कारण छ। यो कमजोर भएको उत्तेजना हुनेछ उल्लेख गरिनु पर्छ ढिलो वातानुकूलित reflexes गठन गरिनेछ (वा साधारण सिर्जना गरिने छैन)। र यो मामला मा परिणाम छैन स्थिर छ। हामी बढ्तै बलियो stimuli उपस्थिति सुरुवात के हुनेछ स्थलीय (सुरक्षा) ब्रेक लगान को संयन्त्र सक्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यो पनि वातानुकूलित reflexes को गठन मा नकारात्मक प्रभाव छ।
को गठन को आधार
यो प्रक्रियाको अल्फा कि conditioned reflexes को गठन को संयन्त्र, के हो? यस मामला मा, मुद्दा को शारीरिक पक्ष हामीलाई अलिकति मद्दत गर्नेछ। यसलाई पहिले नै आणविक स्तर तल्लीन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, जानकारी को निर्धारण गर्न धेरै पक्षहरूमा धन्यवाद मा Ribonucleic एसिड आयोजित। यदि शरीर यसको राशि, प्रयोगशाला जनावर मा सिक्ने दक्षता worsening पछि फल्स। पनि संलग्न यो प्रक्रिया र cerebellum, striatum र यति मा। तर माथिको कम जनावर गर्न विशेष भन्छिन्। स्तनधारी र यो पछि व्यक्तिमा, माथि उल्लेख गरिएझैं जिम्मेवार Cortex छ। तिनीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका लिन तर यो उद्देश्य लागि छाँटकाँट छन् भनेर मात्र संस्थाहरू छैनन्। बी लागि वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यस reticular गठन। यसरी, कुकुर मा प्रयोग मा, यो तिनीहरूले मस्तिष्क hemispheres हटाउन भने, उनीहरूले एक वातानुकूलित सहज क्रिया गठन गर्न सक्ने फेला परेन। तर केवल सबैभन्दा सरल।
ओह, सुन्दर, हाम्रो स्नायु प्रणाली! यो जस्तो थियो - यस्ता सादगी! एक यो पुन सिर्जना गर्नुहोस्, वा अक्षम पुनः सुरु अझै हामी गर्न सक्छन्। तर यो समय को मात्र कुरा छ - थप अनुसन्धान र हामी अन्ततः भनेर बुझ्न र यसलाई कसरी काम गर्छ। तथापि, दुर्भाग्य, तिनीहरूले सधैं सुखद हो, र तिनीहरूलाई बलियो mentality र ज्ञान को एक राम्रो स्टोर मानिसहरूलाई खोज्न हुनेछ पकड। निष्पक्षता मा यो अझै पनि मानवता को हित मा बाहिर छ उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, यस्तो हेरफेर को उपयोगिता बावजुद अझै पनि मान्छे को एकदम ठूलो संख्या sickened छ।
सेल पर्खाल समारोह: समर्थन, परिवहन, सुरक्षा
को mesoderm के हो र यसको विकास के हो?
एक चुम्बकीय क्षेत्र मा पदार्थ। पदार्थ संग चुम्बकीय क्षेत्र अन्तरक्रिया
जीवनको मूल बारेमा आधुनिक विचार। धरती मा जीवन को उद्भव (छोटकरीमा)
एक प्रकार को बेल झाडी रोपण र हेरविचार
Courtiers - को Boyar Duma को एक कार्यालय छ
कसरी शहर पुलकोभो देखि प्राप्त गर्न? प्रतिक्रियाहरू र सिफारिसहरू